4 Tilmaamood oo lagu abuurayo Istaraatiijiyad Suuq Geyn Fiican oo Ganacsi | Martech Zone
4 Tilmaamood oo Loo Abuurayo Istaraatiijiyad Suuq-geyn Fiican oo Ganacsi ah
Jimco, Oktoobar 30, 2020 Jimco, Oktoobar 30, 2020 Jeff Galea
Wax qarsoodi ah maahan in isticmaalka fiidiyowga loo adeegsado suuqgeynta waxyaabaha ku jira ay sii kordhayaan. Dhowrkii sano ee la soo dhaafay, fiidiyowga khadka tooska ah ayaa lagu caddeeyay inuu yahay midka ugu soo jiidashada badan uguna qasbaya ee ka kooban waxyaabaha isticmaalayaasha. Warbaahinta bulshada ayaa noqotay mid kamid ah meelaha ugu wax ku oolka badan ee suuq geynta fiidiyowga, taasina waa xaqiiqo in aan si fudud loo qaadan. Waxaan kuu haynaa talooyin muhiim ah oo ku saabsan sida loo soo saaro fiidiyowyo wax ku ool ah oo soo jiita dareenka dhagaystayaashaada si ay ugu dambayn tallaabo u qaadaan.
1. Abuur fiidiyowyo si aad u dhaliso raadad
Adiga oo kale, macaamiishaada suurtogalka ah kama fekerayaan alaabooyinka ama adeegyada maalintii oo dhan sidaad tahay. Taabadalkeed, waxay leeyihiin danahooda iyo ajendayaal u gaar ah. Si aad uga dhigto macaamiisha mustaqbalka inay joojiyaan oo ay fiiro gaar ah u yeeshaan, waxaad u baahan doontaa inaad ka dhigto waxyaabaha aad ka kooban tahay mid iyaga la xiriira.
Dadku way jecel yihiin oo xusuustaan ​​sheekooyinka. Sheekada wanaagsan waxay leedahay khilaaf cad iyo xallin lagu qanco. Haddii aad qaabeyn karto meheraddaada adoo adeegsanaya sheeko leh dhibaato sharci iyo xalka wax ku oolka ah, dadku waxay u badan tahay inay dhagaystaan ​​farriintaada oo dhan oo ay xusuustaan ​​wixii aad bixin lahayd.
2. Hubi in fiidiyowyadaada la ogaado oo si fiican uga daraan Youtube
Fiidiyoow la soo galiyo kuma filna. Si aad u hesho aragtiyo badan oo aad u soo saarto natiijooyin, waxaad u baahan tahay inaad u sheegto Youtube waxa fiidiyowgaagu ku saabsan yahay iyo cidda bartilmaameedka u ah ay xiiseynayaan. Fiidiyowga fiidiyoogu wuxuu ku siinayaa fursad aad kuhesho fiidiyowyadaada oo aad uhesho oo ay ka helaan dadka saxda ah Sidaa darteed haddii aad rabto inaad ka hesho aragtiyo badan, macaamiisha iyo taraafikada Youtube, raac talooyinkan fudud:
Aqoonso ereyadaada muhiimka ah oo hubi inaad u hagaajiso waxyaabahaaga Youtube iyaga.
Qor cinwaan gaaban, oo xiiso leh, oo soo jiidasho leh oo si kooban u sharraxaya waxa fiidiyowgaagu ku saabsan yahay. Cinwaanka waa inuu ku jiraa ereyada muhiimka ah ee aad bartilmaameedsatay.
Qor sharaxaad faahfaahsan oo u sheegaysa daawadayaashaada sababta fiidiyowgaagu muhiim ugu yahay daawashada una hubi inay ku jiraan ereyada muhiimka ah. Ogsoonow in kaliya saddexda sadar ee hore ay ka muuqdaan Youtube adigoon gujin MUUQAAL MACAAN xiriiri, markaa xiriir kasta iyo wicitaannada ficillada waa in lagu dhajiyaa xagga sare.
Kudar astaamaha ku habboon iyo kala soocida. Tani waxay ka caawineysaa Youtube inay u soo bandhigaan fiidiyowga sidii fiidiyoow la soo jeediyey markii isticmaaleyaashu daawanayaan fiidiyowyo isku mid ah.
Ku dar thumbnail caam ah fiidiyowga oo la jaan qaadaya astaantaada si dadka aad bartilmaameedsato ay si fudud ugu aqoonsadaan fiidiyowyadaada.
Ku dar subtitles iyo qoraalada xiran. Tani waxay kor u qaadeysaa Youtube SEO-gaaga waxayna u sahlanaan doontaa daawadayaasha inay ku daawadaan jawi buuq badan ama cod la'aan.
Ku dhiirrigeli jawaab celinta, faallooyinka, iyo su'aalaha. Tani waxay siin doontaa awooddaada kanaalka waxayna kaa caawin doontaa inaad dhisato bulsho.
Kudar Shaashadda Dhamaadka Youtube-ka dhamaadka muuqaalka. Kuwani waxay kaa caawin doonaan inaad kobciso waxyaabahaaga, kanaalkaaga, iyo xitaa inaad u kaxeyso taraafikada boggaaga.
3. Abuur wacyigelin iyo wadista taraafikada
Fiidiyowyada Fiidiyowga waxaa loogu talagalay inay soo jiitaan dareenka daawadayaasha isla markaana dhiirrigeliyaan xiisaha. Kuwa guuleysta waxay dhadhaminayaan waxa soo socda si dadku ugu hamuun qabaan inay helaan macluumaad dheeri ah. Maalmahan, Warbaahinta Bulshadu waxay si dhakhso leh oo fudud u soo bandhigeysaa macluumaad badan oo ku saabsan wax soo saarkaaga ama adeegyadaada muddo gaaban. Wadaagista majaajillooyinka fiidiyowga ayaa ah hab wax ku ool ah oo lagu soo jiito dareenka dhagaystayaasha bartilmaameedka ah laguna marti qaado inay soo booqdaan boggaaga fiidiyowyo iyo macluumaad qoto dheer oo dheeri ah. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad waxbarto rajooyinkaaga, inaad soo saartid hogaaminno aqoon dheeraad ah leh iyo kordhinta heerkaaga xiritaanka.
4. Cabir iyo Xakamayn
Hadda oo aad bilowday fiidiyowgaaga, waxaad u baahan tahay inaad si sax ah oo sax ah u cabirto waxqabadka fiidiyowgaaga. In kasta oo aragtida fiidiyowgu ay tahay waxa suuqleyda badankood eegi karaan marka hore, had iyo jeer maahan habka ugu wanaagsan ee lagu qiyaaso sida ugu wanaagsan ee fiidiyowgaagu u shaqeynayo.
Waxay ku saabsan tahay hadafkaaga!
Dejinta yoolalka fiidiyowga waa inay noqotaa tallaabadaada koowaad. Tani waxay ku siin doontaa hagitaanka loo baahan yahay inaad diirada saarto kaliya macluumaadka aad u baahan tahay oo aad iska ilaaliso inaad waqti ku lumiso macluumaadka aan khuseyn. Maxaad rajeyneysaa inaad gaarto? Maxay tahay ujeeddadaada suuq-geynta aasaasiga ah ee ololahan? Ma rabtaa inaad abuurto wacyigelin, ka caawiso go'aan qaadashada, ama dhiirigeliso ficil?
Iyada oo ku saleysan taas, waxaad aqoonsan kartaa cabirrada ku habboon ujeeddo kasta.
Hadda, aan aragno cabirrada aad u adeegsan karto ujeedooyinkaaga:
Wadarta Riwaayado - Tani waa qiyaasta ugu fudud laakiin khiyaanada badan. Wadarta riwaayaduhu waxay ku tusayaan tirada ceeriin ee dadka riixay badhanka ciyaarta fiidiyahaaga iyadoon loo eegin inta ay daawadeen fiidiyaha. In kasta oo cabirkani yahay mid ku habboon in lagu cabbiro gaadhista, haddana ma go'aamin kartid sida wax ku oolka ah iyo ka-qaybgalka fiidiyowgaagu yahay.
Ciyaar Qiime - Play Rate waa boqolkiiba inta booqdayaasha bog ee riix batoonka ciyaarta oo bilaabay daawashada fiidiyahaaga. Heerka ciyaarta waxaa lagu xisaabiyaa iyadoo la qaadanayo wadarta tirada riwaayadaha loona qeybiyo tirada xamuulka fiidiyaha. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad go'aamiso haddii fiidiyowgu uu ku dhegan yahay meesha saxda ah iyo sida ay u qurux badan tahay sawirkaaga fiidiyowga ah. Haddii aad heleyso qiimeyaal ciyaar hoose, waxaad u baahan kartaa inaad ka fiirsato inaad fiidiyahaaga dhigto meel caan ah, oo aad ka dhigeyso fiidiyowga gundhig ka weyn, iyo inuu leeyahay thumbnail aad u mashquul badan.
Heerka Hawlgalka - Ka qaybqaadashadu waxay ku tusineysaa inta daawadeyaashaada fiidiyowga ah ay daawadeen, waxaana lagu muujiyaa boqolkiiba. Kani waa tilmaameha ugu muhiimsan ee kuu sheegaya sida muuqaalkaaga iyo muuqaalkaagu u yahay mid xiiso u leh daawadayaashaada wuxuuna kaa caawin karaa inaad aqoonsato barta ay daawadayaashu bilaabayaan inay xiisaha ka lumiyaan iyo qaybaha laga boodayo. Tani waxay sidoo kale kaa caawin doontaa inaad dhigto badhannada wicitaanka-iyo-ficilka iyo walxaha kale ee is-dhexgalka ah si xeeladaysan inta lagu jiro fiidiyowga.
Wadaagga Bulshada - Wadaagista Bulshada waxay muujineysaa sida fiidiyowgaaga loogu wadaagayo kanaallada warbaahinta bulshada. Wadaagista waxyaabaha waxay keeneysaa aragtiyo fiidiyoow badan, gaarsiinta dhagaystayaal cusub, waxayna kaa caawin kartaa inaad go'aamiso sida ay ugu faraxsan yihiin dhagaystayaashaadu ku saabsan waxyaabahaaga iyo sumaddaada.
Heerka Beddelka - Beddelidda waa tirada ficillada la qaado inta lagu jiro ama ka dib marka la daawado fiidiyaha. Kuwani waxay noqon karaan CTA-ga iyo fasiraadaha la riixay, raadadka la soo saaray, iyo inbadan. Qiyaastaani waa wax yar oo khiyaano ah in lala socdo, waxaadna u badan tahay inaad u baahan tahay fiidiyow heersare ah sida Wistia, Vidyard ama Sprout Video si aad u faahfaahsan dhacdooyinka. Heerka Beddelka waa halbeeg muhiim ah oo loo isticmaalo in lagu caawiyo cabbiraadda ROI ee fiidiyowyadaadu abuureen.
Ma dooneysaa inaad waxbadan ka barato sida fiidiyowgu uu gacan uga geysan karo ka-boodka dadaalka suuq-geyntaada?
Nagala soo xiriir hadda latashi Suuq-geynta Fiidiyowga oo bilaash ah.
Fadlan booqo Channelkeena Youtube si aad u hesho Talooyin Fiidiyow oo dheeri ah oo hubaal ah inay kor u qaadayaan ololayaasha suuqgeyntaada.
Tags: qolka4 warbaahintaqolka4mediawacyigelinta fiidiyowgabeddelaadda fiidiyahahawlgelinta fiidiyowgaereyada muhiimka ah ee fiidiyowgasuuqgeynta fiidiyowgaistiraatiijiyadda suuqgeynta fiidiyowgacabirrada fiidiyowgakobcinta fiidiyahaheerka ciyaarta videociyaaraha fiidiyowgawadaaga videoistaraatijiyad youtube
Jeff Galea wuxuu aasaasay Room4 Media isagoo leh ujeedo ah inuu ka caawiyo ganacsiyada adduunka inay isku xirmaan oo ay si wax ku ool ah ula xiriiraan dhagaystayaashooda iyagoo u maraya suuqgeynta fiidiyowga.
5 Xirfadaha Tiknoolajiyadda Berrito ee Suuqgeeyaashu Waxay U Baahan Yihiin Inay Maamuqaan Maanta
Nov 3, 2020 at 3: 34 AM
May 14, 2021 at 7: 24 AM
Waad ku mahadsantahay wadaagida talooyinka. Waxaan tan u adeegsanayaa inaan dadka kale ku fahmo.